Yeroon kan Taa’anii xiinxala Itti Gaggeechanii Miti -
Yeroon kessa jirru yeroo qabsoon hadhooftuun itti gaggeeffamaa jiruu dha. Qabsoon hidhannoo, FDG Oromiyaa keessatti finiinaa jiru baddaa gammajjiittii badaayiyyaa, magaalaatti diina wat-waachisaa jira.
Ilmaan Oromoo gabrummaa jala jiraachuun ummata Oromoo akka hirriiba isaan dhorke kunoo Wayyaanee ummata Oromoo weeratee saamaa, hidhaa, ajjeesaa fi biyyaa baqachiisaa jirtu waliin kokkee walqabanii ajjeesanii du’aa jiru. Cancalli gabrummaa kan dinni barattooniif ittiin nu hidhe dhiiga goota keenyaatiin ciccitaa jira. Dhugaan har’a Impaayeera itiyoophiyaa keessa jiru kan muldhisu biiftuun bilisummaa qarri muldhachaa jiraachuu, gabrummaan ammoo yeroo xumuraaf qilee buu’uuf fiigaa jiraachuudha.
Ummanni keenya bilisummaa dheebootee jira, mirga isaa humna qawweetiin dhabe, lafa isaa halagaan irraa fudhatame deeffachuuf qabsoon inni gaggeessaa jiru qabsoo laayyeetii miti. Qabsoo yeroo ammaa kana Wayyaanee fi ummata Oromoo gidduuttii taasifamaa jiru qabsoo yeroo kamiituu caalaa. Dargaggoonnii sabboontoonni barattoonni ilmaan Oromoo fincillii isaan gaggeessaa jiran dheebuu bilisummaa ummata keenyaa,
mirga abbaa biyyummaa sabni keenya mulqame fala itti godhuu akka
danda’u halagaafis firaafis ifa ta’aa dhufeera. Sabni keenya kan yeroo kamiituu caalaa saamicha, ajjeechaa, hidhaa fi dararaa nuffuu qabsoon amma Oromiyaa kallattii marattuu daraggoota, barattoota isaatiin gaggeeffamaa jiru ifatti muldhisa.
Har’a WBOn,dargggeessi Oromoo bakkayyuu jiru, bahaa lixatti kaabbaa kibbattii, giddu galeessatti diddaa isaa cimsee itti fufee jira. Barri bittaa Murna Wayyaanee nugahee, nurraa haadhaabbatu mormiin jedhu biyyattii iddoo hundumaa dhagahama. Keessumaawuu waggaa darbee kaasee barattoonni Oromoo kaayyoo Wayyaaneen maqaa M.Pilaanitiin biyya Oromoo iddoo lamaa fi sadihitti ciruuf kaayyeeffatte mormuun diddaan gaggeeffame diddaa fira bonsee halagaa rifachiiseedha. Ammalleen qabsoon haqaa, qabsoon farra garbummaa kun caalaatti finiinee murna Wayyaanee hirriiba dhorkaa jira. Diddaan diddaa dhalchee akkuma muldhachaa jiru sadarkaa sirnicha raasurra gaheera. Barataa barsiisaan hojjetaan siviilii bakkayyuu jiru sadarkaa diddaa kana keessatti hirmaachuu gahee jira. Diddaan calqabame kun caalaatti jabaatee itti fufunaan murna gabronfattuu tana hundeerraa buqqisee akka gatu shakkiin hin jiru.
Yakkii wayyaaneen waggoottan 24 darbaniif ummata Oromoorratti gaggeessitee yakka sukanneessadha. Yakka lakkaawamee dhumus miti, hidhamneerra, reebamneerra, ajjeefamneerra, qayee fi qabeenyarraa buqqifamneerra, carraa hohii, carraa barnootaa biyya abbaa keenyaa keessatti lagatamneerra. Yakki ilma namaarratti ni dalagama jedhamnee hin yaadamne hunduu Oromoorratti Wayyaanee fi lukkeelee ishiitiin dalagameera/ ykn raataawwateera. Wanti gabroonfattoonni biyya gabronfatan irratti fe’an hunduu nurratti fe’ameera. Amma ba’aan kun nurraa bu’uu qaba. Abbaa biyyaati waan taaneef akka abbaa biyyaatti jiraachuu qabna.
Saamichi, hidhaan ajjeechaa fi biyyaa godaansifamuun nugahe jennee kaaneerra kun jabaatee itti fufuu fi fiixa bahuu qaba. Sirni badaan biyya Oromoo kaan Wallootti, kaan bahaa fi lixatti ciree Oromoo wal hanqisuuf deemu kun oolee osoo hin bulin gidduu Oromootii bahuun dubbii fardiidha. Murni Wayyaanee fedhii fi kaayyoon ishii handhura Oromiyaa Finfinnee keessa halagaa qubsiistee bara bittaa fi saamichaa dheeraffachuuf ta’us dhiiga ilmaan Oromootin amma ammatti hojiirra hin oollee. Fuunduraafis akka karaa kamiinuu hojiirra hin oolle hundii keenyaa bakka jirrutti FDG finiinaa jirutti makamnee M.pilaanichas haata’u walumaa galattii sirna Wayyaanee ofirraa buqqisnee biyyaa fi bilisummaa keenya harkatti deebifachuuf ka’uun dirqama lammummaatti. Yeroon isaas yeroo teenyee wal irratti ilaallu osoo hin taane, keessaa fi alaan bakka hundaa yeroo itti gamtaan socho’uu qabnuu dha.
Yeroo ammaa kana barataan Oromoo FDG finiinsaa jira. Diddaa akka haaraatti M.pilaanii Finfinneetiin walqabatee bara 2014 eegale kunoo yeroo ammaa kana bifa haaraan guutuu Oromiyaa waliin gahee jira.
Wayyaaneen rifaatuu fi dhiphuurraa kaatee tarkaanfii adda addaa fudhattuus barataan Sd1ffaa irraa kaasee amma Yunivarstiitti jiru falmii isaa finiinsaa jira. FDG walirraa osoo hin citin itti fufe kun har’a manneen baruumsaa Oromiyaa keessa jiran marattii fi magaaloota hedduu keessatti deemaa jira. Waayee M.Pilaanii qofaa osoo hin ta’in gaafiin mirga abbaa biyyummaa, mirga umamaa fi dimookiraasii Oromoo gaafii barattoota dargaggoota kanaati. Sabboontoonni ilmaan Oromoo gaafiilee kanaaf wareegama seenaan hin daganne wareegama qaqqaalii kaffalaa jiru.sochii sabboontoota keenyaa kanatti diinnii abdii kutachaa, ummanni Oromoo ammoo abdiin isaa caalaatti lataa jira.
Qabsoon finiinaa jiru, FDG bahaa lixatti dargaggoota, barattoota Oromootin finiinaa jiru kun caalaatti akka humna horatuuf,gaafiin ummata Oromoos akka galma gahuuf tumsa barbaada. Tumsi duraa ummanni Oromoo baddaa gammoojjii jiraatu, magaalaa baadiyyaa jiraatu ilmaan isaa faana hiriiruu qaba. keessumaa ummanni Oromoo naannawa Finfinnee/ ykn Shaggar jiraatu/ balaan maastar pilaanii kanaan walqabatee dhufu kan qayee fi qabeenyarraa isa buqqisu waan ta’eef of ittisuu qaba.
Diddaa isaa jabeesse itti fufee adda durummaadhan murna abbaa biyyummaa Oromoo haalaa jiru Wayyaanee kana balaaleeffachuu fi mormuu qaba, mormuu mitii akka hundeen sirni kun buqqawu taasisuun dubbii fardii jiraachuuf dhabamuuti.
Harka wal qabatanii irree tokkoon diinaan loluun, ajjeesanii du’uun, mirga ofiitii finciluun dirqama lammii maraati. Gaafiin yeroo gaafii walii tumsuutii. Gaafiin jiru gaafii fincila baddaa gammoojjii Oromiyaatti finiinaa jiru fiixa baasuti. Yeroon; yeroo taa’anii ykn gamaa gamana ejjetanii xinxala adda addaa itti gaggeessanii miti, yeroon; yeroo ta’anii kan hojjetutti quba qabanii fi qeeqanii miti.
Yeroon yeroo lola gabronfataa fi abbaa biyyaa Oromoo gidduuttii deemaa jirutti seenanii gabronfataa rukutanii roorroo bara dheeraa ofirraa kutaniidha.
FDG finiinaa jiru keessatti wareegamni kaffalamaa jira. Wareegama mirga abbaa biyyummaaf kaffalamaa jiru kana dhugoomsuuf hunduu waan danda’u gumaachuun dirqama lammummaa qaba. Kan hundurraawuu eegamu yoo dandeenye kallattiin qabsoo gama hundaanuu finiinaa jirutti makamuudha,yoo dadhabne waan dandeenyeen qabsaawoota keenya cinaa dhaabbachuudha. Oduu fi xinxala siyaasaa karaa TV fi marsaalee gara garaatiin gaggeeffamuun bilisummaan hin dhugoomtu. Quba walitti qabuunis gaafii Oromootif furmaata hin ta’u. Diinni keenya diinni Oromoo diina oduun cabuu miti. Dinni jiru diina qawween nuti dhufeedha. Diina humnaan nu bitaa jiruu dha. Kan deebi’us humnumaani.
Humni ammoo ummata, ummati Oromoo qabsoo isaa sabboontoota dargaggoota ilmaan isaatiin finiinaa jirutti alaa manattii itti dabalamnaan barri wayyaanee gabaabdudha. Kanaafuu harka walqabannee diddaa eegalle haa finiinsinuu!
2 thoughts on “Yeroon kan Taa’anii xiinxala Itti Gaggeechanii Miti”
Obbo abaluu xiinxalaa siyaasaa; obbo abaluu xiinxalaa siyaasaa….gurri nu dhukkube. Utuu waan ijaarsaa dubbataniimmoo waan tokko ture. Isa yeroo isaa hunda aarsaa godhee beela’ee dheebotee; bosona keessa daammaree ; aduu fi diilalli isatti walfuree, lubbuu isaa tokkitti kan bakka buusa hin qabne Qabsoo Bilisummaa Oromoof kennee hojjetaa jiru osoo hin hafii komachuun faashinii isaanii ta’eera Odeessituun xiinxalaa siyaasaa ofiin jettu kun teessee oduu mandaraa laankibuu akka hojii guddaatti fudhattee isa kaanitti quba qabuu isheetu nama dhiba. Xiinxalaa siyaasaa!!!!! Mu!! Yaa dabeettii!!! Hojii salphaa filatte ; wareegama miti kan siree irraa nama hin buufne argatte!!!
Yeroon yeroo walbalaaleffannu otoo hinta’in yero ija keenya hunda, qabeenya, dandeytii keenyaa fi waan qabnu handaa diina keenya irratti deebifnuu dha